အူတက်ရယ်နေရလောက်အောင် ချစ်ဇနီးလေးနဲ့အတူစကားအနိုင်တွေလုပြောကာ မျက်နှာပြောင်ထားတဲ့ ကိုပေါက်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင် – အနုပညာရပ်ဝန်း
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို ပရိသတ်ကိုအကြိုက်တွေ့စေခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကိုလည်း ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက် ကိုတော့ သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ သူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အထူးအားပေးမှုကို အခိုင်မာရရှိနေတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုပေါက် ကတော့ အနုပညာလောကမှာ စွယ်စုံရ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးနော်…။
ကိုပေါက် ဟာဆိုရင် အမြဲလိုလို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေတတ်သလို စိတ်သဘောထား ပြည့်ဝတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ပရိသတ်တွေအတွက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကိုလည်း နောက်ထပ် ဖန်တီးရိုက်ကူးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင် သာယာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစု လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားလေးနှစ်ယောက်လည်း မွေးဖွားထားပါသေးတယ်။
ကိုပေါက်ကတော့ လတ်တလောမှာ ခရီးတွေဆက်တိုက်ထွက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလည်း ချစ်ဇနီးလေးနဲ့အတူ မျက်နှာပြောင်ကာ အခွီတွေလုပ်ကာ အပျော်လေးရိုက်ထားတဲ့ tik tok ဟာသဗီဒီယိုလေးတွေကို ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ် ။ ဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးရယ်မောနေရတာကြောင့် cele zone ပရိသတ်ကြီးတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
နှစ်ယောက်လုံးကတော့ ဆရာတွေပဲ??နည်းနည်းမှာ လျှော့ပေးမယ် မထင်နဲ့???ဘုန်းကြီးလူထွက်နဲ့သူဌေးသမီး ညားကြသောအခါ?#Tik Tok#kopauk#ကိုပေါက်#ဟာသ
Posted by Aung Min Naing on Thursday, 10 September 2020
ကိုပေါက်ကတော့ လတ်တလောမှာ ခရီးတွေဆက်တိုက်ထွက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလည်း ချစ်ဇနီးလေးနဲ့အတူ မျက်နှာပြောင်ကာ အခွီတွေလုပ်ကာ အပျော်လေးရိုက်ထားတဲ့ tik tok ဟာသဗီဒီယိုလေးတွေကို ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ် ။ ဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးရယ်မောနေရတာကြောင့် cele zone ပရိသတ်ကြီးတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။credit